Umbala, Ukwakheka, Umugqa, Izinto Ezilula Zamakhaya Ahle | Umklamo weHongfu Besam
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Umbala, Ukwakheka, Umugqa, Izinto Ezilula Zamakhaya Ahle | Umklamo weHongfu Besam
2020 / 10 / 29 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 969 0
I-Xiao Bei Interior Design Alliance
Ukuthanda, okumsulwa nokumsulwa, okude
Ukuzama, lapho izingalo zakho zikhathele kakhulu
Ukufinyelela inkanyezi engafinyeleleki
Umnikazi waleli cottage elinezitezi ezintathu ngumndeni wabantu abayisithupha abebehlala ndawonye izizukulwane ezintathu. Ebhizinisini, uzimisele njenge-cheetah futhi unesifiso esinamandla sokuphatha ibhizinisi lakhe, kanti empilweni unentshisekelo enkulu ekuphatheni impilo yaseMelika, ekhetha ukukhanya okulula nokukhohlisayo kokulula kwesimanje. Indawo ekhanyayo nevulekile imvumela ukuthi ajabulele impilo yokuzilibazisa futhi ekhululekile.
Njengoba le yindlu yedolobha esezingeni eliphakathi nendawo, ingahlangabezana nokusebenza kwendlu, ngakho-ke asizange siguqule isakhiwo sonke futhi sigxile ekwakheni umoya nasekufundeni imininingwane. Ukusetshenziswa kwezinto ezilula ezifana nombala, ukwakheka nolayini kuyahlangana kwakha indawo yokuhlala esezingeni eliphakeme enomuzwa wokujula nokucwengwa. Imele indlela yokuphila esezingeni eliphezulu yabantu besimanje baseMelika, ngokubandakanya ukuhlanganiswa okulula nokulula kwezinto, kepha futhi nokuzenzakalela kwemvelo nothando.
Ngokuhlaziywa kocwaningo lwe-psychology yomninikhaya wombala, sikhiphe imibala emithathu ebalulekile: grey efudumele, i-rose pink ne-turquoise elula. Sihlele ukuhlelwa kwesikhala ngokwengeziwe ngobunikazi bomnikazi, sifaka ukwakheka okuntekenteke emininingwaneni yedizayini ukuze isikhala sisonke sibe nokuqina kobuciko okuqinile kanye nokukhuluma okungokomzwelo.
Ngokungafani nesitayela sendabuko saseMelika, esigcwele imigqa ekhanyayo neyinkimbinkimbi nokuhlobisa okungadingekile, sikhetha imigqa ehlanzekile nelula, enqunywe odongeni nangaphezulu, bese iba yinto yokwakhiwa kuyo yonke indawo. Imigqa yensimbi ishunyekwe emininingwaneni yemigqa emile ntathu yodonga, iveze izinkulumo eziningi zamazinga endawo ngendlela yobuciko, kwakheke ibhalansi ebonakalayo ecashile.
Ama-rivets wensimbi, izinkinobho ezigoqiwe, imigqa elula yokubamba isandla inomqondo omuhle wokuthungwa nokunethezeka, ethula intelezi efanelekile yokunethezeka. Indawo yokubasa umlilo, okuyiyona nto emele isitayela saseMelika, ihlelwe ngemuva kosofa, futhi ukumodela okwenziwe lula kuncishisiwe futhi kuvinjelwe ngaphandle kokuzikhuza futhi kunzima ukukuziba.
Ngemuva kokunwetshwa kohlobo lwendlu yoqobo, indawo yokusebenza kwepiyano yenziwa, kwashiywa umhlobiso oyinkimbinkimbi futhi kukhombisa imininingwane ephansi yokhiye wokuphila.
Ngenxa yendawo elinganiselwe yekhishi lokuqala, umsebenzi wasekhishini lasentshonalanga wathuthelwa egumbini lokudlela, lapho ukubhaka, itiye lantambama nokuthatha izimpahla ezomile kwenziwa konke ngasikhathi sinye, kugwema ukunyakaza okuphindaphindwayo kuya nokubuya ekhishini nasendlini yokudlela. Isikhala sisonke esinombala ocacile futhi okhanyayo njengetoni, umphakathi ophakeme waseMelika uthandwe ukuphela kwekhulu elidlule le-taro purple njengombala wokuhlobisa ukuze weqe uphume ngombala, ngokuma okuhle nenhle.
I-crystal chandelier nezihlalo zokudlela ezigobile zinika isikhala isigqi nobuhle obunamandla, kuyilapho imidwebo yensimbi ye-lavender iveza isimo sothando nesisha, eveza ngokunembile ubumnene bomnikazi nobunono bempilo yakhe yansuku zonke.
Ngemuva kwezinto eziyingqayizivele zobuciko ingilazi umnyango uyindawo evulekile yekhishi enamathayela we-beige marble, amapaneli eminyango efudumele empunga namathayili we-fishbone akhanyayo, aqhubeka nethoni efanayo negumbi lokudlela. Ngesisekelo sobulula obusebenzayo nobuhle besikimu sombala sokwenza umbono wesikhala uvuleke ngokwengeziwe, ikhabethe elenga kanye naphansi kwekhabethe liphathe umehluko ocophelelayo, kukhombisa ukufuna kwemininingwane komklami ekugcineni.
Ngakwesokudla kwendawo yepiyano yinsimu yokuqala yaphansi, ngenxa yendawo yayo encane engxenyeni yokuklama yokwenza lula, nempahla yokulungisa ingadi yaseJapan ukuveza imizwa yokulula. Kuwo wonke ama-intshi, ubuhle bezwe buvezwa, budala isimo sempilo ehamba kancane.
Imibala empunga, yesihlabathi noju yakha indawo yokuhlala efudumele nenethezekile. Isendlalelo sekhanda lombhede sihlukaniswe isilinganiso segolide, futhi imigqa ye-plaster isetshenziselwa ukwakha indawo yohlaka ukugxilisa umbono, kuhlanganiswe nodonga ukwakheka okuthathu ukugqamisa isigqi sesikhala. Ekukhetheni kombhede, sishiye isitayela sendabuko saseMelika sakhetha ifenisha entsha yaseMelika ngentelezi yaseChina, isimo sokuhlanganiswa okuphelele kweMelika neChina.
Igumbi lendodakazi liyaqhubeka nemibala yegumbi lokuhlala neyokudlela, ngokusebenzisa izilinganiso ezahlukahlukene zempunga efudumele, i-rose pink, i-turquoise ekhanyayo iveza umqondo ohlukile wesikhala somoya.
Izitebhisi zizonke zenziwe ngompunga osezingeni eliphakeme, futhi izindonga zipendwe ngokugxuma kombala, inhlanganisela yegrey noluhlaza okwesibhakabhaka igcwele umphumela omangazayo, ukuthintwa okuluhlaza okwesibhakabhaka ukuphuma. Imigqa isetshenziswa ngokugqamile kulesi sikhala, imigqa yesamente, udonga oluqinile lokhuni, imigqa yozimele wokhuni oluqinile, imigqa yezitebhisi yamaRoma, yonke imininingwane yokucubungula nokuhlobisa, yikhono lomklami lokulawula isitayela njengombukiso wonke.
Isitezi sesithathu siyikamelo lokulala lomnikazi nomkakhe, elinempunga efudumele, eluhlaza okwesibhakabhaka noju njengez imibala eyinhloko yesikhala. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka usetshenziswa kabanzi kuyo yonke indawo esikhaleni ukwethula isimo esimnene, njengolwandle olunesibhakabhaka esiluhlaza kanye namafu amhlophe nomoya ohelezayo.
Ngoba isakhiwo sokuqala sesitezi sesithathu sinendawo yokugezela eyodwa kuphela, ebingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zombhangqwana nendodana yabo, ngakho-ke sizoshintsha igumbi lokugezela elilodwa libe yindlu yokugezela kabili. Indlu yangasese yoqobo yayihlukaniswe kabili, i-1/2 njengendawo yokugezela eyinhloko kanye ne-1/2 njengendawo yokugezela yezivakashi, ngaleyo ndlela kufinyelelwa ubumfihlo nokufudumala kwezikhala ezifanele.
Igumbi lezingane esitezi sesithathu elendodana, kanti igumbi lokulala liyigumbi elehlukile elenza imisebenzi eminingi elisetshenziswa njengendawo yokufunda. Sikhethe i-grey, i-aqua, i-turquoise ekhanyayo futhi yahlanganiswa namakhethini wephethini yengwe, ukuze ikhululeke endaweni eqabulayo nejabulisayo futhi ibone ubulula.
Kumklami, ukuklama akuyona inhlanganisela yento eyodwa, kepha inhlanganisela yezinto eziningi, futhi kudinga inhlanganisela yezinto eziphilayo zesakhiwo sendawo, ubuciko bobuciko, nezidingo zamakhasimende ukuze kwakheke indlela yokuphila ehlukile kumninikhaya. Inani ledizayini alincikile kwimiphumela yokubuka, kepha kunalokho ekuhlangabezaneni nezidingo zomnikazi ngokwesitayela, ubumnene, nokusetshenziswa kumazinga amaningi.
Ukuhlaziywa kohlobo lwendlu yoqobo
Igumbi lokuphumula esitezi sokuqala lithintwa ukukhanya okuvela kuvulandi.
Space Isikhala esincane ekhishini
:: Incazelo yamaphuzu asemqoka wokuphinda kwenziwe kabusha
❶ Susa iminyango kuvulandi kanye namawindi okwandisa indawo yokuhlala futhi wandise indawo yokusebenza kwepiyano.
Isikhala esilinganiselwe ekhishini langempela, nweba ikhishi lasentshonalanga liye egumbini lokudlela ukuze kuhlaliswe i-oven, i-pantry, isitoreji neminye imisebenzi
:: Ukuhlaziywa kohlobo lwendlu yoqobo
Room Igumbi labantu abadala lasekuqaleni liyindawo ephakanyisiwe futhi edinga indawo yokuhlala ezosetshenziswa njengosilika.
Rooms Amakamelo okulala amabili awakwazi ukusetshenziswa ngokuzimela ngendlu yokugezela eyodwa esitezi sesibili
Size Usayizi omncane wokuqala wegumbi elisebenzayo
❶ Hlukanisa ikamelo labadala elinamagumbi okugeza amabili ahlukene, ushintshe ulayini wokungena uye egumbini lokugezela labantu abadala.
❷ Ukususa ama-balcony nokwandisa usayizi wezindawo ezi-multifunctional
Amakamelo okulala amabili ahlukene awakwazi ukuhlala emazingeni amathathu noma ❶.
Area Indawo encane yezinhloso eziningi
Clo Igumbi lokugqoka elihlukile lomsebenzi wokugqoka womnikazi wesifazane ❶
BathroomIndlu yokugezela ephindwe kabili, shintsha ukuqondiswa kwesango lokulala eliyinhloko endaweni yengubo yokulala eyinhloko
Room Hlukanisa igumbi elenzelwa izinto eziningi nendawo yegumbi lengane, elizosetshenziswa njengendawo yokufunda yendodana.
Isitayela: I-American elula futhi ewubuciko
Uhlobo Lwendlu: Ikotishi
UMklami Oyinhloko: Xia Zhang
Iphethini Yensiza: I-Whole Case Design
Ikheli Lephrojekthi: Chengdu. Ihlathi le-Poly Two Rivers
I-Design Agency: I-Chengdu Hongfu Besam Space Design
Edlule :: 120 Sq.Ft. I-Duplex Ingabuye Ibe Nezitebhisi Zokuvunguza Kakhulu Kakhulu | Ukwakhiwa kwe-Ermu Olandelayo: Intombazane Engashadile YaseJapane Eneminyaka Engama-35 ubudala, Amamitha Ayizikwele Angu-30 Wokuzijabulisa Okuphelele Iminyaka Engu-11, Izinkulungwane Zama-200,000 Zisangana Ngomona!